3 Astaamood Oo Lagu Garto In Gacalisadaada Uu Haayo Maseer Daran - Aayaha
Home/XIRIIRKA IYO GUURKA/3 Astaamood Oo Lagu Garto In Gacalisadaada Uu Haayo Maseer Daran
Waxaa hubaal ah inay ku jeceshahay balse waddo qaldan ayay ku muujineysa jacaylka ay kuu qabto sababtoo ah maseerka ayaa xad dhaaf ah.
Maseerka wuxuu keeni karaa fikradaha xun ee ku jira qalbiga haweeneyda kuwaas oo noqon kara kuwo aad xun. Haweenka maseerka badan waa baaritaan badanyihiin waxayna qabtaan shaqo ka culus tan ay qabato hay’adda sirdoonka Mareykanka ee FBI.
Sidaa darteed, side ku ogaaneysaa inay hayaan arimo maseer? Aqri 3 astaamood oo lagu garto in saaxiibtaa ay qabto arimo maseer.
Waxay kugu dab gashaa barahaaga bulshada
Marka gabadha ay maseersantahay xittaa way xittaa waxay kugu dabagaleysa internet-ka. Waxay rabtaa inay ogaato wax kasta oo aad internet-ka ka qabatid; kuma aamini karto oo xittaa waxay raadineysaa qaabkii ay ku heli lahayd lambar sireedkaaga (Password) si ay u gasho bartaada bulshada.
Markaad calaamadahaas aragtid waa inaad ogaataa in saaxiibtaa uu haayo maser aad u daran.
Daqiiqad kasta ayay kusoo wecee
Waanu ognahay in isgaadhsiintu muhiim u tahay xiriir kasta balse waxaan sidoo kale aad u ognahay in isgaadhsiintu ay ku dareensii karto in lagu caburinaayo.
Maseer daran ayaa haayo haweeneyda marka ay kusoo wacdo daqiiqad kasta sababtoo ah waxay kaaga shakisantahay haweeney kale. Markaad ku aragto astaamahan dabadeed waa inaad ogaataa in saaxiibtaa uu maser daran haayo.
Kama hadli kartid haweeney kale
Waxba kama galin haweeneyda aad ka hadleyso waxay tahay, qodobkaan waa mid ka mamnuuc ah mowduuca markaad wada sheekeysaneysiin ma rabto inaad ka hadasho haween, xittaa waxay noqon kartaa qofaad shaqo wadaag tihiin oo aysan jirin wax xiriir hoose ah oo idinka dhexeeyo sidaa darteed haddii ay dhibsaneyso saaxiibtaa haka hadlin wax haween ah.
Markaad ku aragto calaamadahan kadib waa inaad ogaataa in saaxiibtaa ay qabto maseer daran.
5 Waxyaabood Oo Haddii Aad Sameyso Ninkaagu Aad Kuu Jeclaanayo